PAquarium စျေး - အွန်လိုင်း PQT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို PAquarium (PQT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ PAquarium (PQT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ PAquarium ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ PAquarium တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
PAquarium များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
PAquariumPQT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.8PAquariumPQT သို့ ယူရိုEUR€0.681PAquariumPQT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.611PAquariumPQT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.732PAquariumPQT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr7.2PAquariumPQT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.5.07PAquariumPQT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč17.83PAquariumPQT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł2.99PAquariumPQT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$1.07PAquariumPQT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$1.11PAquariumPQT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$17.93PAquariumPQT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$6.2PAquariumPQT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$4.39PAquariumPQT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹59.88PAquariumPQT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.135.09PAquariumPQT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$1.1PAquariumPQT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$1.21PAquariumPQT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿24.89PAquariumPQT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥5.56PAquariumPQT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥84.83PAquariumPQT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩947.13PAquariumPQT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦309.91PAquariumPQT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽58.83PAquariumPQT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴22.12
PAquariumPQT သို့ BitcoinBTC0.00007 PAquariumPQT သို့ EthereumETH0.00202 PAquariumPQT သို့ LitecoinLTC0.0137 PAquariumPQT သို့ DigitalCashDASH0.00837 PAquariumPQT သို့ MoneroXMR0.00851 PAquariumPQT သို့ NxtNXT60.36 PAquariumPQT သို့ Ethereum ClassicETC0.113 PAquariumPQT သို့ DogecoinDOGE225.74 PAquariumPQT သို့ ZCashZEC0.00909 PAquariumPQT သို့ BitsharesBTS29.39 PAquariumPQT သို့ DigiByteDGB25.45 PAquariumPQT သို့ RippleXRP2.65 PAquariumPQT သို့ BitcoinDarkBTCD0.0269 PAquariumPQT သို့ PeerCoinPPC2.57 PAquariumPQT သို့ CraigsCoinCRAIG355.75 PAquariumPQT သို့ BitstakeXBS33.3 PAquariumPQT သို့ PayCoinXPY13.62 PAquariumPQT သို့ ProsperCoinPRC97.97 PAquariumPQT သို့ YbCoinYBC0.00042 PAquariumPQT သို့ DarkKushDANK250.34 PAquariumPQT သို့ GiveCoinGIVE1689.82 PAquariumPQT သို့ KoboCoinKOBO177.87 PAquariumPQT သို့ DarkTokenDT0.737 PAquariumPQT သို့ CETUS CoinCETI2253.1
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Tue, 11 Aug 2020 04:45:02 +0000.